आजको तस्बीर : यस्तो छ, अल्पसंख्यक माझीबस्तीको दूर्दशा ! – ebaglung.com
२०७५ बैशाख २३, आईतवार १६:५८	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ बैशाख २३ । बागलुङ रामरेखा तल खनियाबास कालीगण्डकी किनारमा प्राचीनकाल देखी बसोबास गर्दै आएका अल्पसंख्यक माझीहरु अहिले २५ वर्ष भन्दा बढी भयो घरबासविहीन अवस्थामा जीवन यापन गर्न बाध्य छन् । छिमेकी देश चीनको सहयोगमा २०४७/०४८ सालमा पोखरा बागलुङ मोटरबाटो निर्माण गर्दा पुख्र्यौली घरबासबाट बिस्थापित बनेका माझीहरु बाँगेचौरको उत्तरी कुनामा अस्थायी छाप्रो बनाएर जीवन यापन गरिरहे ।
चुनावमा भोेट माग्ने देखी घरमा काम गराउन बोलाउदा सम्म तिमीहरुको बसोबासको बन्दोबस्त गछौँ भन्ने आश्वासन सुन्दासुन्दा थकित परेका सोझा माझीहरुको घरबासको अझै उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ ।
साँझ विहान कालीगण्डकीको किनारमा बालुवा चालेर स्वर्णकणहरु संकलन गरी दुईचार रुपयाँ आर्जन गर्दै आएका माझीहरुको जीवन यापनको अर्को पेसा माछा मार्नु हो । बाँगेचौरबाट कालीगण्डकी झरेर बालुवा चाल्नु र माछा मार्नु उनिहरुलाई सहज बनेन । निमेक मजदूरी गरेर जीवन नैयाँ चलाई रहेका अल्पसंख्यक माझीहरुलाई दुर्भाग्यले कहिल्यै पिछा छोडेन । जसले जे भने पनि नाईँ नभन्ने सोझा माझीहरुको लागि बल्ल तल्ल नगर विकास कोषबाट प्राप्त सहयोग रकमबाट बस्ती (घरहरु) निर्माण सुरु भएको छ । वडा भेलाबाट केबी रानामगरको संयोजकत्वमा गठित माझीबस्ती व्यवस्थापन समन्वय समितिको पहलमा नगर विकास कोषबाट प्राप्त रु ६० लाख भन्दा बढी रकम बागलुङ नगरपालिकाको नाममा निकासा भएकोमा बागलुङ नगरपालिकाको चरम लापर्बाहीकाकारण माझी बस्तीमा बनिरहेका घरहरु गुणस्तरहीन भएकोले त्यस्को गुणस्तर परीक्षण गर्न समितिले माग गर्दा समेत बेवास्ता गरिएपछी गत चैत महिनामा समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी सामुहिक राजिनामा दिएको थियो ।
तत्कालीन संयोजक केबी रानामगर भन्छन्,घरहरु गुणस्तरहीन बनेकाले नगर विकास कोष र बागलुङ नगरपालिकाकालाई प्राविधिक परीक्षण गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि दुबै निकायले बेवास्ता गरेका र अल्पसंख्यक माझीहरुका लागि निर्माण गरिएका गुणस्तरहीन घरहरुमा व्यापक आर्थिक चलखेल भएकोले हामीले पत्रकारहरुको भेला गरी त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार, लापर्बाही बारे जानकारी गराउदै सामुहिक राजिनामा दिएको बताए ।
भाग्यले ठगिएका अल्पसंख्यक माझीहरु नयाँ बनिरहेका घरहरुबाट समेत ठगिन पुगेको चौतर्फी टीकाटिप्पणी भैरहेको छ । सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग गरेर मोटरबाटोले बिस्थापित बनेका सिधासाधा माझीहरुका लागि नयाँ बनिरहेका घरहरु बसोबासका लागी अनुपयुक्त भएको बारे सामाजिक सन्जाल फेसबुकका भित्ताहरु भरिएका छन् ।
माझीबस्तीमा बनिरहेका घरहरुको गुणस्तर परीक्षण गर्न लगाई बसोबासका निम्ति उपयुक्त अनुपयुक्त के छ सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक थियो । तर प्रमुख जिम्मेवार बागलुङ नगरपालिकाले लापर्बाहीलाई ढाकछोप गर्ने बाहेक अर्को काम नगरेको पीडितहरुको आरोप छ ।
कुखुराको खोर भन्नपनि नसुहाउने घरहरु देखेर माझीहरु दुखित छन्, चिन्तिछ छन् । उनिहरुको पीडा बागलुङ नगरपालिकाका सरोकारवालाहरुले नसुनेपछी उनिहरुले अख्तियारमा उजुरी समेत दिएका छन् । अल्पसंख्यक गरीब माझीहरुलाई अख्तियार बाहेका दुख सुनाउने र पीडा विसाउने अर्को ठाउँ रहेन ।
अब हुन्छ के ? प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
माझी बस्तीका बारेमा सामाजिक सन्जाल फेसबुक मार्फत सम्प्रेषण गरिएका तथ्यपरक कुराहरु र दस्ताबेज अनि तस्बीरहरुले प्रयाप्त जानकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
झलक देखलाजाकी विजेता तेरिया फौजा मगर तथा सफल गायक सुरज थापा बहराइन आउँदै
कागज गरी छुटे यातायात व्यवसायी, बिकिरणसमेत दुई जना माथि सार्वजनिक मुद्दा !